सरकार ! कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध लड्ने उपयुक्त तयारी खै ?
शनिवार, आश्विन ३, २०७७ १२:२७:३९ युनिकोड
आइतवार, श्रावण ३२, २०७७ रौतहट अनलाइन न्युजडेस्क
प्रज्ञा ढकाल /
कोरोनाको कहरका कारण यतिबेला नेपाल पनि डरलाग्दो अबस्था मा रहेको छ । निरिह बनेका नागरिक बाच्नकै लागि राज्यको अभिभाबकिय भूमिका खोजिरहेका छन् । हो बिश्वले नै नसोचेको अकल्पनिय अबस्था अबस्था आईलाग्यो, सक्रमण रोकथाम र नियनत्रणका लागि पूर्बतयारी वा सजकता अपनाउन तयारी पुगेन । तर चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोभिड–१९ बिस्तारै अन्य मुलुकतीर फैलदै गर्दा हामीले सजगतको तयारी गर्न समय नपाएका भने होईन । तर जिम्मेबार पदमा रहेका जिम्मेबार ब्यक्तिहरुबाट सुरुका समयमा जति हल्का ढंगबाट यो बिषयलाई लिने काम भयो त्यसको परिणाम नै आजको भयाबह अबस्था हो ।
आफुले सुन्न चाहेका बाहेक अन्य को कुरा नै सुन्न नसक्ने सरकारको अर्कमण्यताको शिकार आज निरिह नागरिक भै रहेका छन् । यस बिचमा सरकारले अनुदानमा अरुले दिएको बाहे अन्य भेन्टिलेटर थप्ने काम त गरेन गरेर भोली ठुलै बिपत परे के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने पूर्ब तयारी समेत गरेन । आज तराईका जिल्लाहरु कोरोना हट स्पट बन्दै गएका छन् । चिकित्सकहरु सरकारसंग गुहार मागिरहेका छन् । उपचारका लागि अस्पतालको ढोका चहार्दा चहार्दे मृत्युबरण गरेका छन् । अस्पतालको ढोका मा पुगेर पनि उपचार नपाएर आफना मान्छे गुमाएका परिबारले राज्यले गरेको हत्या भन्ने कि नभन्ने ? प्रश्न उठ्नु स्वभाबिकै हो ।
उपचारको फ्रन्टलाईनमा खटिनुपर्ने चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्थकर्मीहरु आफै सक्रमणको सिकार बनेर बसिरहेका छन् । यसै गरी फ्रन्टलाईनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसंगै अन्य सरोकारवालालाई हौसला, आत्मबल दिदै अभिभाबक बन्नुपर्ने सरकार यस्तो समयमा पनि पार्टीभित्रको सत्ता र शक्तिको लडाईमा रुमलिरहेका छन् । सत्तारुढ दल र सरकारले संक्रमणका गाम्भीर्यतालाई नबुझेको हो कि हेलचक्राई गरेको हो ? कहिले सम्म सहने नागरिकले ? कोरोना रोकथा र नियन्त्रण तथा उपचार, यसबाट सृजना भएको समस्या बाट आहत बनेका नागरिकले रोजिरोटीको ब्यबस्थाका बारेमा राज्यले केही गर्छकी भनेर सञ्चारमाध्यममा आँखा टोलाईरहेका नागरिकले पटक - पटक सत्तारुढ दलको भागबण्डाको झगडाका खबर बाहेक अरु के पाए ? अहिले नेपाल कोरोनाको ‘हट स्पट’ बन्दै । एक सय भन्दा बढीको कोरोनाकै कारण ज्यान गइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले सबैलाई झस्काएको छ ।
केही दिन यता संक्रमित र मृतकको सँख्या बढ्दा नेपालमा कोरोनाको सन्त्रास थपिएको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारको व्यवहारिक तयारी र गम्भीरता नहुँदा नागरिक थप त्रासमा छन् । सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ । मन्त्रीहरुको भुमिका पनि जिम्मेवार नदेखिँदा नागरिक आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । संशय र सन्त्रासकैबिच नागरिकहरु बाँच्न विवश छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै हचुवामा लकडाउनको घोषणा पनि गर्यो । करिब ४ महिना नेपाली जनता कोरोनाबाट जोगिन भन्दै घरभित्रै बस्न बाध्य भए । कोरोना नियन्त्रण होला भनेर नागरिकले सरकारको लकडाउनको आव्हानमा साथ पनि दिए । तर, सरकारका मन्त्रीनै कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेको खबर आएपछि नागरिक निराश भए र आक्रोसित पनि । नागरिकले पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । सडकमा आउने अवस्था बन्यो । तर, पनि सरकारले नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन । जनतामा चरम असन्तुष्टि र सरकारकाप्रति तिव्र असन्तुष्टि छ । त्यो कुन बेला विष्फोट हुन्छ टुंगो छैन ।
कोरोनाले धेरैको रोजीरोटी गुम्यो भने धेरैले आर्थीक र मानसिक समस्या भोगे । योबिचमा आत्महत्या गर्नेको सँख्या बढेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि सार्वजनिक भयो । लकडाउन (बन्दाबन्दी) खुलेपछि २२ दिनको अवधिमा मात्र नेपालमा ६ हजार ४३८ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत साउन ६ गते कोरोना संक्रमित संख्या १७ हजार ९९४ रहेको थियो । तर त्यस यता साउन ७ गते देखि (आज) साउन २८ सम्म ६ हजार ४३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए । शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार कोरोना संक्रमतिको सँख्या नेपालमा साढे २५ हजार नाघिसकेको छ ।
त्यसैगरी लकडाउन खुले यता मात्र ५१ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउन ६ गतेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० रहेको थियो । हाल कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या सय नाघिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लकडाउन अन्त्य भएपछि मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु प्रदेश २ को पर्सामा भएको छ । त्यहाँ २२ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कोरोनाको प्रभाव बढि देखिएको छ । वीरगंजमा अस्पताल चहार्दा चहार्दै कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनुप¥यो । उपत्यकामा मात्र पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ हजार ६ सय ९७ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने २० जनाको ज्यान गइसकेको छ । देशका सातै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको सँख्या बढिरहेको छ ।
माथी चर्चा गरिएको तथ्यांकले कोरोना विस्तारै नेपालमा समुदायस्तरमै फैलिइसकेको संकेत गर्छ । सरकारले विना तयारी लकडाउन गर्दा त्यसले कोरोना नियन्त्रणमा खासै भुमिका खेल्न सकेन । जबकी चीनबाट कोरोना शुरु हुँदा नेपालसँग त्यसबाट बच्नका लागि आवश्यक शतर्कता र तयारी गर्ने पर्याप्त समय थियो । तर, सरकारका मन्त्रीहरुले त्यो समयलाई उपयोग गर्न सकेनन् । पर्यटनमन्त्री कोरोनामुक्त नेपालको हावा गफमा रमाइरहे । प्रधानमन्त्री बेसार पानीले कोरोना तह लाग्ने उडन्ते गफमा रुमल्लिरहे । स्वास्थ्य मन्त्रकिो कार्यक्षमता र नियतमा त सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको छ ।
(जनता समाजबादी पार्टीकी नेतृ ढकाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद हुन्)
प्रकाशित मिति: आइतवार, श्रावण ३२, २०७७, ०७:५५:००
भोलि बस्‍ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित
सुर्खेतका ६ जना चिकित्सकमा कोरोना पुष्टि